Fametaka mangarahara Bopp fonosana mangarahara China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Bopp Tape Thickness,Bopp Tape Wholesale,Fanondroana voafaritra Bopp
Home > Products > Taling Sealing > Transparent Tape > Fametaka mangarahara Bopp fonosana mangarahara
Fametaka mangarahara Bopp fonosana mangarahara
Ny BOPP Transparent Packaging Tape dia sasany amin'ny paoradola izay be mpampiasa indrindra amin'ny fandefasana ny fandefasana ny fanaterana entana sy ny fandaharam-potoana ankehitriny, ary misy antony tsara. Ny rafitry ny molekiola manokana sy ny fanamafisana ny resin ny polypropylene dia manome fananana mekanika sy optical tena tsara, izay ilaina indrindra amin'ny fampiharana isan-karazany, ny iray amin'izany dia fonosana.
BOPP packing tape dia vita amin'ny sarimihetsika polypropylene (BOPP) biaxial oriented. Ny polypropylene dia polymer thermoplastic (izay midika fa malefaka noho ny mari-pana iray hafa izy, ary miverina amin'ny fanjakana mafy aorian'ny hatsiaka). Ankehitriny, polypropylene voalamina biaxial dia horonantsary PP ahitàna araka ny lamin'ny masinina sy eo amin'ny làlan'ny masinina. Mampitombo ny tanjaka ary koa ny fahazavana an-tsarimihetsika. Ny rafitra dia mahatonga ny fampiharana automatique sy manual amin'ny fonosana fonosana ho mora kokoa.
Packing Tape S pecification:
Regular size Thickness (micron) Width (mm) Length (Y)
Bopp white transparent tape 48-80 48-72 50-1000
Ny tombony azo amin'ny fantsona fametaka vita amin'ny mazava
● Manome hery ara-drafitra izay afaka misolo ireo bolts, rivets, lasitsy ary hafainganana mekanika hafa.
● Afaka mampiasa fitaovana maivana kokoa.
● Fitaovana hafahafa tsy ilaina amin'ny tsy fifankahazoana.
● Miasa ho toy ny tombo-kase hamandoana / sakana tontolo iainana.
● Manome ny haingam-peo sy ny fihenan'ny feo.
● Fohy ny fotoana fivoriambe.
● Hanafoana ny filàna refin-refiny amin'ny fanesorana ny fihenjanan-dronono.
● Hanafoana ny fasteners mekanika hita maso noho ny ambony noho ny hatsarana.
● Manome tombon-dahatra amin'ny ala sarotra toy ny fitaratra.
● Manome fihenan-java-bolo sy akanjo fametrahana hantsana.
● Hanafoana ny filàna fatorana roa "miaraka" sy ny toerana manome ny haingam-pandeha mety indrindra.
P roduct kalitao:
Fitaovana fanasiam-bolo miloko ambaratonga loko
Bopp Tape Thickness
Bopp Tape Wholesale
Fanondroana voafaritra Bopp
Tape White Packing
Bopp Tape Thickness Bopp Tape Wholesale Fanondroana voafaritra Bopp Thickness the thickness 50mic Thickness Bopp Tape mangarahara Tape White Packing